Home Wararka Been abuur laga sameeyay Moos la sheegay in Soomaaliya laga soo dhoofiyay
Been abuur laga sameeyay Moos la sheegay in Soomaaliya laga soo dhoofiyay
Dowladaha Iskutaga Imaaraadka Carabta iyo Panama ayaa si adag u beeniyay warar maalmihii lasoo dhaafay lagu faafinayay baraha bulshada iyo warbaahinada qaar oo sheegayay in dalalkaas la geeyay moos laga dhoofiyay Soomaaliya.
Wasiirka horumarinta beeraha wadanka Panama Augusto Valderrama , ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku beeniyay in moos laga dhoofiyay Soomaaliya la geeyay dalkooda halkaasna lagu sii iibinayo.
Waxa uu sheegay Wasiirka in been abuur aan raad laheyn uu yahay warka sheegaya in moos laga qaaday Soomaaliya la geeyay Panama, waxa uuna tilmaamay in aan Panama loo fasaxin badeecadaha laga keeno Soomaaliya.
“Waxaan shacabka u cadeyneynaa in gabi ahaan ay been abuur tahay wararka la faafinayo ee ah in Panama ay muus ka keensato Soomaaliya. Dalka looma ogola in la soo dejiyo moos Soomaaliya laga keenay ” ayuu yiri Wasiirka Horumarinta beeraha ee Panama.
Baraha bulshada dalalka Imaaraadka iyo Panama ayaa lagu baahiyay warar sheegaya in ganacsato waa weyn oo u dhashay dalkaasi iyo masuuliyiin xilal sare dowlada ka haya ay ka dambeeyeen in dalkaasi la geeyo moos laga dhoofiyay Soomaaliya.
Dalka Imaaraadka ayaa dhankooda si buuxda u beeneyay wararka la isla dhexmaraayay ee lagu sheegay in moos sumaysan laga soo dhoofiyay dalka Soomaaliya. Nasiib xumo dowlada iyo beerelayda Soomaalida kama warhayaan dacayaadan mana aysan ka hadlin alaa iyo hada.